Dhir Beerid Lagu Maamuusayay Sanad Guurada 24 aad Ee Guusha 20ka Ginbood Oo Ka Dhacday Duleedka Magaalada Jijiga - Cakaara News
Dhir Beerid Lagu Maamuusayay Sanad Guurada 24 aad Ee Guusha 20ka Ginbood Oo Ka Dhacday Duleedka Magaalada Jijiga
Jigjiga(CN) Sabti.May.30.2015, si loo dhabeeyo himilooyinkii, hiigsigii iyo istaraatajiyadihii uu dhigay raysil wasaarihii aragtida dheeraa ee Meles Zinaawi ee ahayd cagaarinta dhulka ayaa waxay xukuumada DDSI dadaal dheer ugu jirtaa sidii loo hirgalinlahaa qorshahaasi. Waxayna, maanta xukuumada DDSI ku beertay in ka badan 7 kun oo geed duleedka magaalada Jijiga.
Waxaana dhirbeeridaasi ka soo qayb qalay masuuliyiinta xukuumada DDSI ugu saraysa oo uu ka mid yahay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, golaha wasiirada, DDSI golaha capinetka DDSI shaqaalah xafiisyada heer deegaan, iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Jijiga.
Waxaana geedkii ugu horeeyay halkaasi ku beeray madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, wuxuuna ka warbiyay ahmiyada ay leeday dhiraynta dhulku. Isaga oo madaxwaynuhu tilaamay in ay qofkasta waajib ku tahay in uu beero dhir si dhulkeenu u noqdo dhul cagaaran. Waxaa kale oo uu madaxwaynuhu sheegay In dhirta oo la beeraa ay si wayn uga qayb qaadanayso ilaalinta nabaad guurka dhulka.
Masuuliyiintii kale oo ka qayb qaatay dhir beeridaasi ayaa ka warbixiyay ahmiyada ay u leedahay dhirbeeradani lagu maamuusayo sanad guurada 24 jirsatay ee 20ka ginbood.